बुढी गण्डकीको मुआब्जा बुझेपछि बालुवा तस्करी - Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
बुढी गण्डकीको मुआब्जा बुझेपछि बालुवा तस्करी
Published On : १७ बैशाख २०७५, सोमबार १७:०५
दरौँदी ः बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाले चर्केको जग्गामा अवैध बालुवाखानी सञ्चालन गरिएको पाएपछि स्थानीय प्रशासनले बन्द गर्न आदेश दिएको छ । स्थानीय प्रशासनले बुधबार गरेको अनुगमनमा बूढीगण्डकी किनारका अवैध बालुवाखानी र बालुवा धुने एक दर्जन अवैध फिरफिरे उद्योग सञ्चालन गरिएको भेटिएको हो ।
ज्वालामुखी गाउँपालिकाअन्तर्गत पीपलटार र बुंगकोटघाट तथा गोरखाको दर्बुङ, पट्टी लगायतका स्थानमा एक दर्जनभन्दा बढी अवैध बालुवाखानी सञ्चालन रहेको अनुगमनका क्रममा भेटिएको हो । उजुरीका आधारमा छड्के अनुगमनमा पुगेका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी धोलरकराज ढकाल खानी सञ्चालन गरिरहेका स्थलमा पुग्दा बालुवा ओसारपसार भइरहेको थियो । उनले बालुवाखानी सञ्चालनमा रोक लगाउनुका साथै बालुवा ओसार्ने ट्रिपरलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरी प्रशासनलाई निर्देशनसमेत दिएका छन ।
अनुगमनका क्रममा बालुवा तस्करले खानी र फिफिरे दर्ता नै नगरी जेनेरेटरबाट विद्युत् आपूर्ति गरी उद्योग सञ्चालन गरेको फेला परेको हो । राजमार्ग क्षेत्र वरपरका त्रिशूली नदीमा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् र बालुवा प्रशोधन उद्योग गत फागुन अन्तिम सातादेखि बन्द भएपछि बूढीगण्डकी किनारमा बालुवा तस्कर केन्द्रित भएका हुन । अवैध रूपमा सञ्चालित पृथ्वी राजमार्ग छेउका करिब सय वटा फिरफिरे स्थानीय प्रशासनले बन्द गराएपछि जिल्लामा बालुवाको अभाव हुँदै आएको छ ।
त्यसलगत्तै बालुवा तस्कर बूढीगण्डकी नदी किनारमा उद्योग सञ्चालन गर्न सुरु गरेका हुन । उनीहरूले सदरमुकाम लगायतका बजारमा महँगो मूल्यमा बालुवा बिक्री गर्दै आएका छन ।
‘विगत ६ महिनादेखि नै गोरखा र धादिङको सीमामा पर्ने बूढीगण्डकी किनारका बालुवाखानी सञ्चालन हुने गरेकाले पानी धमिलो हुँदै गएको उजुरी परेको थियो,’ प्रजिअ श्यामप्रसाद भण्डारीले भने । प्रस्तावित बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाबाट करोडौं रकम मुआब्जा लिइसकेपछि आयोजनाको अधीनस्थ आएको जग्गा सरकारी नभएर स्वत ः व्यक्तिको सम्पत्ति सरह हुने र स्वीकृतिबेगर आयोजना स्थलको बालुवा र जंगलको काठ बेच्नु सरासर कानुन विपरीत रहेको आयोजना प्रमुख कृष्ण कार्कीले बताए ।
आयोजना प्रमुख कार्कीका अनुसार ‘नदी किनारका बालुवाखानी र गिट्टी बेच्दै गए आयोजनालाई आवश्यक पर्ने परिमाणका निर्माण सामग्री कताबाट आपूर्ति गर्ने ? यसबारे स्थानीय निकाय चनाखो हुनुपर्नेमा उल्टै दोहनकारीलाई सघाएको आरोप लगाए ।